काजकिरिया गरेका ब्यक्ति घर फर्किएपछि...
04 Jul 2013 | 19:28pm
रुकुम- आफन्त गुमाउँदाको पीडा सही नसक्नुको हुन्छ। त्यसमा पनि परदेशको भूमिमा घरमूलीको मृत्यु भएको खबरले परिवारलाई असह्य पीडा हुन्छ। आफ्नो धार्मिक संस्कार अनुसार १३औं दिनको काजक्रिया गर्दै मृत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्नुबाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र? मृत्यु भएको खबरले काजक्रिया गरेको ब्यक्ति टुप्लुप्कै घर फिरे भने त्यो परिवारमा कस्तो होला? यहाँको एक परिवारमा यस्तै भएको छ। जसले भूल्नै नसकिने पीडामा फेरि खुसीको वहार आएको छ।
भारतको केदारनाथमा पहिरोमा पुरेर मृतक भनिएका एक ब्यक्ति काजक्रिया सकिएपछि टुप्लुक्क घर फिरेका छन्। पश्चिम रुकुमको झुला गाविसका डिल्लीबहादुर ओली आफ्नो मृत्युको ८औं दिनको काजक्रिया भइरहेको बेला घर आएका छन्। बिहीबार उनी घर फर्कदै गर्दा घरमा उनको नाममा छोराहरु किरिया बसिरहेका थिए। आफन्तले वरखी बारिरहेका थिए। पत्नीले सिंदुर पुछेर चुरापोते फ्याँकेकी थिइन्। छिमेकीहरु क्रियापुत्रीलाई खाना खुवाउन पँधेरातिर लिन तम्तयार थिए। घरमा सोख परेको यस्तै बेला मृतक भनिएका डिल्लीबहादुर भने घरमूनिको बारीको डिलमा टुप्लुक्कै आइपुगे। घर परिवार र आफन्तहरु अक्कनबक्क भए। डिल्लीबहादुर पनि वाल्ल परेर इन्तुन चिन्तु भए। ‘के भो घरमा?’ डिल्लीबहादुरले उल्टै घरमा प्रश्‍न गरे। उनको प्रश्‍न झर्न नपाउँदै क्रियापुत्रीले सेतो हटाए। हत्तपत्त कपडा फेरे। एकछिन घरमा रुवावासी चल्यो। पत्‍नी गीताले सेतै कपडामै अँगालो हालिन्। भाक्कानिएर रोइन्। डिल्लीबहादुर पनि रोए। यस्तो अवस्था देखेर छिमेकीले समेत आँसु थाम्न सकेनन्। एकछिन खुसीको रुवावासी चल्यो। काजक्रियाका गुटुमुटु पारेर खोल्सामा फालियो। खुसीमा भोजभतेर चल्यो। चार महिनाअघि ओली कामका लागि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा काम पर्न गएका थिए। ‘म जीवत नै छु भन्ने परिवारलाई आस्वस्त पार्न घर आएका हुँ।’ डिल्लीबहादुरले भने, ‘घरमा आउँदा त मेरै नाममा काजक्रिया भएको देखेँ।’ डिल्लीबहादुरले जीवत हुँदा मृत्युको काजक्रिया पाएकाले आफ्नो आयु दीर्घायु हुने प्रतिक्रिया दिए। बिहीबार खसी काटेर गाँउलेहरुले खुसीयाली मनाएका छन्।